Cheslea oo guul Dirqi ah ka gaartay Watford xilli uu Rikoodh sameeyay Edan Hazard+SAWIRRO – Gool FM
Cheslea oo guul Dirqi ah ka gaartay Watford xilli uu Rikoodh sameeyay Edan Hazard+SAWIRRO
( Premier League ) 26 Dis 2018. Cheslea ayaa guul ay ku dhibtootay ka gaartay Watford kaddib markii ay kaga badiyeen 2-1.
Kullanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-1, waxaana hogaanka dheesha qabatay Cheslea oo waxaa goolka daah furka u dhaliyay Edan Hazard kubbad uu goolhayaha la dhaafay tasoo uu shabaqa uu cidlaa dhexdhigay.
Laakiin intaa la aadin nasiinada cayaarta Watford ayaa durba la timid goolka bareejada waxaana u dhaliyay Roberto Pereyra markii uu goolka ku hubsaday kubbad aan dhulka dhicin tasoo laga soo tuuray gees-kalaadka ama koornada.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad kooxda guriga ayaa lasoo gashay cayaar aad u sareysa inkastoo Blues ay aheyd mid kullanka inta badan maamuleysay.
Balse waxaa u suuragashay kooxda Sarri iney helaan goolka ay ku habteen hogaanka cayaarta waxaana u dhaliyay Hazard oo markii labaad shabaqa gaaray.
Goolasha Hazard ayay ka dhigan yihiin inuu 100-gool u dhaliyay Chelsea tan iyo markii uu kusoo biiiray 2012-kii xilli sido kale uu dhaliyay goolkiisii 9-aad ee xagaagan horyaalka.
Chelsea ayay guushan ka dhigan tahay iney dib ugu soo laabato afarta kaalin ee ugu sareysa horyaalka waxayna lee yihiin 40-dhibcood 19-kullan ee ilaa hadda la dheelay.
Brighton oo Guul u diiday Arsenal kaddib markii….+SAWIRRO
Solskjær oo ugu baaqay war farxad leh jamaahiirta Man United kahor kulankooda soo aadan ee horyaalka Premier League